နိုငျငံသားတဈဦးခငျြး အခွခေံသဘာဝ အခှငျ့အရေးမြား (Bill of Rights) – Kyaw Zaw Oo's Blog
August 5, 2021 August 5, 2021 web_master
နိုငျငံသားတဈဦးခငျြး အခွခေံသဘာဝ အခှငျ့အရေးမြား (Bill of Rights)
အမေရိကန်နိုင်ငံသားများ၏ သဘာဝအလျောက် ရပိုင်ခွင့်ရှိပြီး အစိုးရက တားဆီးပိတ်ပင်ပိုင်ခွင့်မရှိသော အခွင့်အရေးများ အစုအဝေးကို နိုင်ငံသား အခြေခံအခွင့်အရေးစု (Bill of Rights) ဟုခေါ်သည်။
အမေရိကန်၏ ပထမဆုံး ပြည်နယ် (၁၃) ခုတို့စုပေါင်းလျက် ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းဖွဲ့စည်းပုံ (Articles of Confederation) အားဖြင့် နိုင်ငံတည်ထောင်ခဲ့ကြသော်လည်း ထိုကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းဖွဲ့စည်းပုံအရ အားကောင်းသော ဗဟိုအစိုးရမရှိဘဲ နိုင်ငံတစ်ခုအနေဖြင့် ရပ်တည်ဖို့ အခက်အခဲရှိသည် ဟု ယူဆကြသဖြင့် ပိုမိုအားကောင်းသော ဖက်ဒရယ်အစိုးရ တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် Articles of Confederation ခေါ် ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဆင်နိုင်ရန် ကြိုးစားကြသည်။ ဗဟို ဘက်ဂျက်ရရှိရေးအတွက် ပြည်နယ်များထံမှ ခခယယတောင်းရခြင်း၊ ဆူပူပုန်ကန်မှုများကို နှိမ်နင်းရာတွင် အခက်အခဲကြုံခြင်း၊ နိုင်ငံရပ်ခြားအစိုးရများနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ရေး စသည့် စသည့် အားနည်းချက်များကို ပြင်ဆင်နိုင်ရေးမှာ (၁၃) ပြည်နယ်စုတို့အတွက် အရေးတကြီးလိုအပ်လာသည်ဖြစ်ရာ အားကောင်းသော ဗဟိုအစိုးရတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် Federalist ခေါ် ဖက်ဒရယ် အစိုးရပေါ်ပေါက်ရေးဝါဒီများက ကွန်ဂရက် (Continental Congress) တွင် ကြိုးပမ်းကြသည်။ ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းရေးမလိုလားသူများကို anti-federalist များ ဟု ခေါ်ကြသည်။
ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဆင်သည်ထက် ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်ရေးဆွဲသည်က ပိုကောင်းမည်ဟု ယူဆကြသဖြင့် ရေးဆွဲကြရာ – ထို အမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်တွင် နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်း၏ အခြေခံသဘာဝအခွင့်အရေးများ မပါရှိသေးဖြစ်နေခြင်းအား ထောက်ပြကြသည်။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသို့ မအပ်နှင်းထားသော မည်သည့်အခွင့်အာဏာမဆို ပြည်နယ်များနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များထံတွင် ရှိနေမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးသူများက ဆွေးနွေးကြသော်လည်း ထောက်ပြသူများက ဘ၀င်မကျနိုင်ကြပေ။
ထို့ကြောင့် ထိုအချက်များကို ထည့်သွင်းကြရေး အကြိတ်အနယ် ဆွေးနွေးမှုများအပြီးတွင် ထိုအခြေခံအခွင့်အရေးများကို ဖွဲ့စည်းပုံ၏ ထပ်တိုးပြင်ဆင်ချက် (amendment) များအဖြစ် ကွန်ဂရက်နှင့် ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းက အတည်ပြုနိုင်ရန် Federalist တစ်ဦးဖြစ်သူ ဂျိမ်းစ်မက်ဒီဆင် (James Madison) က ပြင်ဆင်ချက်မူကြမ်း (၁၂) ချက်ကို တင်ပြရာ ၁၇၉၁-ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ သုံးနှစ်အတွင်း အချက် (၁၀) ချက်ကို အမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ ပြင်ဆင်ချက်များအဖြစ် အတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။ ထို ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ချက် ဆယ်ချက်ကိုပင်လျှင် နိုင်ငံသားများ၏ အခြေခံအခွင့်အရေးစု (Bill of Rights) ဟု ခေါ်ဆိုကြခြင်း ဖြစ်လေသည်။
အားကောင်းသည့်အစိုးရတစ်ရပ်ရပ်သည် မင်းဆိုးမင်းညစ် အစိုးရ (tyranny) မဖြစ်လာရေးကို တွေးမျှော်ကြံဆခဲ့ကြသော အမေရိကန် ရှေးဦးဖခင်များကြောင့် Bill of Rights သည် ယနေ့ထက်ထိ ဒီမိုကရက်တစ် အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း အခွင့်အရေးများကို အကာအကွယ်ပေးသည့် ယန္တရား၏ အခိုင်အမာ အုတ်မြစ်ဖြစ်နေလျက်ရှိသည်။
အဆိုပါ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ချက် ဆယ်ချက်တို့အား အောက်တွင် အကျဉ်းချုပ် သာသာပြန် ရည်ညွှန်းချက်နှင့်အတူ ဖော်ပြထားပါသည်။
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government foraredress of grievances. (ပထမပြင်ဆင်ချက်။ ။ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်၊ သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်၊ နစ်နာမှုများအတွက် အစိုးရထံတင်ပြခွင့်)
A well-regulated Militia, being necessary to the security ofafree State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed. (ဒုတိယပြင်ဆင်ချက်။ ။ စည်းစနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထား သော ပြည်သူ့စစ်များဖွဲ့စည်းထားရှိနိုင်ရေးအတွက် လက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားရှိခွင့်)
No Soldier shall, in time of peace be quartered in any house, without the consent of the Owner, nor in time of war, but inamanner to be prescribed by law. (တတိယပြင်ဆင်ချက်။ ။ အများပြည်သူ့ အိမ်နေရာများတွင် ပိုင်ရှင်များ၏ သဘောတူညီချက်မရှိဘဲ စစ်သားများကို စခန်းချစေခွင့်မရှိစေဖို့)
The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized. (စတုတ္ထပြင်ဆင်ချက်။ ။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု မရှိဘဲ ၀င်ရောက်ရှာဖွေခြင်း ဖမ်းဆီးခြင်းများမှ ကင်းလွတ်ခွင့်)
No person shall be held to answer foracapital, or otherwise infamous crime, unless onapresentment or indictment ofaGrand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to beawitness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation. (ပဉ္စမပြင်ဆင်ချက်။ ။ ကျနမှန်ကန်သော တရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် တရားစီရင်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို ဆန့်ကျင်ထွက်ဆိုရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်၊ ပြစ်မှုတစ်ခုတည်းကို နှစ်ကြိမ်စီရင်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်)
In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right toaspeedy and public trial, by an impartial jury of the State and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the Assistance of Counsel for his defense. (ဆဋ္ဌမပြင်ဆင်ချက်။ ။ တရားစွဲဆိုခံရသူများ၏ အဖွင့်အရေးများ၊ ဥပမာအားဖြင့် မြန်မြန်ထက်ထက်စီရင်ခြင်း၊ အများပြည်သူ့ရှေ့မှောက်စီရင်ခြင်း)
In suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried byajury, shall be otherwise re-examined in any court of the United States, than according to the rules of the common law. (သတ္တမပြင်ဆင်ချက်။ ။ တရားမမှုများတွင် ဂျူရီဖြင့်တရားစီရင်ခြင်း)
Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted. (အဋ္ဌမပြင်ဆင်ချက်။ ။ အာမခံတင်ငွေ အလွန်မကျွံတောင်းဆိုခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်၊ ရက်စက်သော ပုံမှန်မဟုတ်သော အပြစ်ပေးခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်)
The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people. (န၀မပြင်ဆင်ချက်။ ။ ပြည်သူတို့၏ အခြားသော အခွင့်အရေးများ)
The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people. (ဒသမပြင်ဆင်ချက်။ ။ ပြည်ထောင်စုသို့ မအပ်နှင်းသော ကြွင်းကျန်အာဏာများအားလုံး ပြည်နယ်များလက်ထဲတွင် ရှိနေခြင်း)
အမရေိကနျနိုငျငံသားမြား၏ သဘာဝအလြောကျ ရပိုငျခှငျ့ရှိပွီး အစိုးရက တားဆီးပိတျပငျပိုငျခှငျ့မရှိသော အခှငျ့အရေးမြား အစုအဝေးကို နိုငျငံသား အခွခေံအခှငျ့အရေးစု (Bill of Rights) ဟုချေါသညျ။
အမရေိကနျ၏ ပထမဆုံး ပွညျနယျ (၁၃) ခုတို့စုပေါငျးလကျြ ကှနျဖကျဒရေးရှငျးဖှဲ့စညျးပုံ (Articles of Confederation) အားဖွငျ့ နိုငျငံတညျထောငျခဲ့ကွသျောလညျး ထိုကှနျဖကျဒရေးရှငျးဖှဲ့စညျးပုံအရ အားကောငျးသော ဗဟိုအစိုးရမရှိဘဲ နိုငျငံတဈခုအနဖွေငျ့ ရပျတညျဖို့ အခကျအခဲရှိသညျ ဟု ယူဆကွသဖွငျ့ ပိုမိုအားကောငျးသော ဖကျဒရယျအစိုးရ တညျဆောကျနိုငျရေးအတှကျ Articles of Confederation ချေါ ကှနျဖကျဒရေးရှငျး ဖှဲ့စညျးပုံကို ပွငျဆငျနိုငျရနျ ကွိုးစားကွသညျ။ ဗဟို ဘကျဂကျြရရှိရေးအတှကျ ပွညျနယျမြားထံမှ ခခယယတောငျးရခွငျး၊ ဆူပူပုနျကနျမှုမြားကို နှိမျနငျးရာတှငျ အခကျအခဲကွုံခွငျး၊ နိုငျငံရပျခွားအစိုးရမြားနှငျ့ စာခြုပျခြုပျဆိုနိုငျရေး စသညျ့ စသညျ့ အားနညျးခကျြမြားကို ပွငျဆငျနိုငျရေးမှာ (၁၃) ပွညျနယျစုတို့အတှကျ အရေးတကွီးလိုအပျလာသညျဖွဈရာ အားကောငျးသော ဗဟိုအစိုးရတညျဆောကျနိုငျရေးအတှကျ Federalist ချေါ ဖကျဒရယျ အစိုးရပျေါပေါကျရေးဝါဒီမြားက ကှနျဂရကျ (Continental Congress) တှငျ ကွိုးပမျးကွသညျ။ ဖကျဒရယျဖှဲ့စညျးရေးမလိုလားသူမြားကို anti-federalist မြား ဟု ချေါကွသညျ။
ကှနျဖကျဒရေးရှငျး ဖှဲ့စညျးပုံကို ပွငျဆငျသညျထကျ ဖှဲ့စညျးပုံအသဈရေးဆှဲသညျက ပိုကောငျးမညျဟု ယူဆကွသဖွငျ့ ရေးဆှဲကွရာ – ထို အမရေိကနျဖှဲ့စညျးပုံအသဈတှငျ နိုငျငံသားတဈဦးခငျြး၏ အခွခေံသဘာဝအခှငျ့အရေးမြား မပါရှိသေးဖွဈနခွေငျးအား ထောကျပွကွသညျ။ ဖကျဒရယျပွညျထောငျစုသို့ မအပျနှငျးထားသော မညျသညျ့အခှငျ့အာဏာမဆို ပွညျနယျမြားနှငျ့ လူပုဂ်ဂိုလျမြားထံတှငျ ရှိနမေညျဖွဈကွောငျး ဆှေးနှေးသူမြားက ဆှေးနှေးကွသျောလညျး ထောကျပွသူမြားက ဘဝငျမကနြိုငျကွပေ။
ထို့ကွောငျ့ ထိုအခကျြမြားကို ထညျ့သှငျးကွရေး အကွိတျအနယျ ဆှေးနှေးမှုမြားအပွီးတှငျ ထိုအခွခေံအခှငျ့အရေးမြားကို ဖှဲ့စညျးပုံ၏ ထပျတိုးပွငျဆငျခကျြ (amendment) မြားအဖွဈ ကှနျဂရကျနှငျ့ ပွညျနယျတဈခုခငျြးက အတညျပွုနိုငျရနျ Federalist တဈဦးဖွဈသူ ဂြိမျးဈမကျဒီဆငျ (James Madison) က ပွငျဆငျခကျြမူကွမျး (၁၂) ခကျြကို တငျပွရာ ၁၇၉၁-ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလအထိ သုံးနှဈအတှငျး အခကျြ (၁၀) ခကျြကို အမရေိကနျဖှဲ့စညျးပုံ၏ ပွငျဆငျခကျြမြားအဖွဈ အတညျပွုနိုငျခဲ့သညျ။ ထို ဖှဲ့စညျးပုံပွငျဆငျခကျြ ဆယျခကျြကိုပငျလြှငျ နိုငျငံသားမြား၏ အခွခေံအခှငျ့အရေးစု (Bill of Rights) ဟု ချေါဆိုကွခွငျး ဖွဈလသေညျ။
အားကောငျးသညျ့အစိုးရတဈရပျရပျသညျ မငျးဆိုးမငျးညဈ အစိုးရ (tyranny) မဖွဈလာရေးကို တှေးမြှျောကွံဆခဲ့ကွသော အမရေိကနျ ရှေးဦးဖခငျမြားကွောငျ့ Bill of Rights သညျ ယနထေ့ကျထိ ဒီမိုကရကျတဈ အမရေိကနျလူ့အဖှဲ့အစညျးတှငျ လူပုဂ်ဂိုလျတဈဦးခငျြး အခှငျ့အရေးမြားကို အကာအကှယျပေးသညျ့ ယန်တရား၏ အခိုငျအမာ အုတျမွဈဖွဈနလေကျြရှိသညျ။
အဆိုပါ ဖှဲ့စညျးပုံပွငျဆငျခကျြ ဆယျခကျြတို့အား အောကျတှငျ အကဉျြးခြုပျ သာသာပွနျ ရညျညှနျးခကျြနှငျ့အတူ ဖျောပွထားပါသညျ။
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government foraredress of grievances. (ပထမပွငျဆငျခကျြ။ ။ လှတျလပျစှာကိုးကှယျခှငျ့၊ လှတျလပျစှာပွောဆိုခှငျ့၊ သတငျးစာလှတျလပျခှငျ့၊ ငွိမျးခမျြးစှာ စုဝေးခှငျ့၊ နဈနာမှုမြားအတှကျ အစိုးရထံတငျပွခှငျ့)
A well-regulated Militia, being necessary to the security ofafree State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed. (ဒုတိယပွငျဆငျခကျြ။ ။ စညျးစနဈတကြ ဖှဲ့စညျးထား သော ပွညျသူ့စဈမြားဖှဲ့စညျးထားရှိနိုငျရေးအတှကျ လကျနကျကိုငျဆောငျထားရှိခှငျ့)
No Soldier shall, in time of peace be quartered in any house, without the consent of the Owner, nor in time of war, but inamanner to be prescribed by law. (တတိယပွငျဆငျခကျြ။ ။ အမြားပွညျသူ့ အိမျနရောမြားတှငျ ပိုငျရှငျမြား၏ သဘောတူညီခကျြမရှိဘဲ စဈသားမြားကို စခနျးခစြခှေငျ့မရှိစဖေို့)
The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized. (စတုတ်ထပွငျဆငျခကျြ။ ။ ကြိုးကွောငျးဆီလြျောမှု မရှိဘဲ ဝငျရောကျရှာဖှခွေငျး ဖမျးဆီးခွငျးမြားမှ ကငျးလှတျခှငျ့)
No person shall be held to answer foracapital, or otherwise infamous crime, unless onapresentment or indictment ofaGrand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to beawitness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation. (ပဉ်စမပွငျဆငျခကျြ။ ။ ကနြမှနျကနျသော တရားစီရငျရေးလုပျငနျးစဉျမြားဖွငျ့ တရားစီရငျခွငျး၊ မိမိကိုယျကို ဆနျ့ကငျြထှကျဆိုရခွငျးမှ ကငျးလှတျခှငျ့၊ ပွဈမှုတဈခုတညျးကို နှဈကွိမျစီရငျခွငျးမှ ကငျးလှတျခှငျ့)
In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right toaspeedy and public trial, by an impartial jury of the State and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the Assistance of Counsel for his defense. (ဆဋ်ဌမပွငျဆငျခကျြ။ ။ တရားစှဲဆိုခံရသူမြား၏ အဖှငျ့အရေးမြား၊ ဥပမာအားဖွငျ့ မွနျမွနျထကျထကျစီရငျခွငျး၊ အမြားပွညျသူ့ရှမှေ့ောကျစီရငျခွငျး)
In suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried byajury, shall be otherwise re-examined in any court of the United States, than according to the rules of the common law. (သတ်တမပွငျဆငျခကျြ။ ။ တရားမမှုမြားတှငျ ဂြူရီဖွငျ့တရားစီရငျခွငျး)
Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted. (အဋ်ဌမပွငျဆငျခကျြ။ ။ အာမခံတငျငှေ အလှနျမကြှံတောငျးဆိုခံရခွငျးမှ ကငျးလှတျခှငျ့၊ ရကျစကျသော ပုံမှနျမဟုတျသော အပွဈပေးခွငျးမှ ကငျးလှတျခှငျ့)
The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people. (နဝမပွငျဆငျခကျြ။ ။ ပွညျသူတို့၏ အခွားသော အခှငျ့အရေးမြား)
The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people. (ဒသမပွငျဆငျခကျြ။ ။ ပွညျထောငျစုသို့ မအပျနှငျးသော ကွှငျးကနျြအာဏာမြားအားလုံး ပွညျနယျမြားလကျထဲတှငျ ရှိနခွေငျး)
Previous မာ့ချဈဝါဒအပျေါ ဘာထရနျရပျဆယျ၏ ခပြေခကျြ
Next တရုတျခွံဘေးက မွကှေကျကလေးမြား